Horyaalka Ingariiska Oo Furmay Maanta Iyo Kooxda Liverpool Oo Barbaro Ku Bilaabatay | WWW.DARARWEYNE.TK
Waxaa maanta dalka Ingariiska ka furmay horyaalka loogu daawashada badan yahay caalamka ee Premier League oo kulamo ka tirsan la ciyaaray, iyadoo kulankii ugu weynaa uu dhexmaray kooxaha Liverpool iyo Sunderland, kasoo barbaro 1-1 ah ku soo dhamaaday ciyaar ka dhacday garoonka Anfield.
Liverpool ayaa goolka ku hormartay bilowgii ciyaarta, laad xor ah uu soo tuuray ciyaaryahan Charlie Adam ayaa waxa madax ku dhaliyay Luis Suarez, kaasoo 5 daqiiqo ka hor inta uusan goolka dhalin…………… ka qasaariyay Liverpool rigoore.
Reds ayaa garoonka la soo gashay afar ka mid ah 5tii ciyaaryahan ee ay xagaagan soo iibsadeen sida Charlie Adam, Jordan Henderson, Jose Enrique iyo Stewart Downing, lakiin natiijadii ay kulankoodii ugu horeeyay horyaalka Ingariiska ka qaateen Anfield waxa ay aheyd hal dhibic oo qura.
Kulamada kale ee la ciyaaray kooxda Bolton ayaa cashar u dhigtay kooxda ku cusub horyaalka Ingariiska ee Queens Park Rangers, markii ay ku garaaceen afar gool iyo waxba. Gary Cahill oo ay dooneyso kooxda Arsenal ayaa goolka u furay, waxaa ku xigay gool ay iska dhaliyeen QPR, Klasnic ayaa u seddexeeyay waxaana ciyaarta soo xiray Muamba oo goolka afaraad dhaliyay ciyaarta oo 10 daqiiqo harsan tahay.
In Arsenal ama Newcastle United midkood uu ku badiyo 5-0 ma ahane caawa waxaa hogaanka horyaalka Ingariiska la hooyan doonta iyadoo heysa kooxda Bolton.
Dhinaca kale kooxda Wolves ayaa 2-1 ku garaacday Blackburn Rovers halka Fulham iyo Aston Villa ay ku kala baxeen barbaro goolal la’aan ah, Kooxda ku cusub horyaalka Ingariiska ee Norwich City iyadana waxa ay barbaro 1-1 ah ku celisay kooxda Wigan Athletic.
Iyadoo haatan la ciyaaray shan kulan kaliya maalintii ugu horeysay ee horyaalka Ingariiska ee xilli ciyaareedka 2011-2012 waxaa la bixiyay ku dhawaad 27 calaamada hurdiga ah, waxaana maalinta ka sii hartay kulanka Arsenal iyo Newcastle United.
Sidoo kale ciyaaryahanka kooxda QPR C.Hill ayaa noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay ee calaamada casaanka lagu salaamo horyaalkan cusub.
« Taariikh Nololeedka Xiddiga weyn Lionell Messi
ArSenal oo barbardhac gashey kulankeedii koobaad ee horyaalka ingiriiska, iyo Gervinho oo ciyaartiisii 1-aad casaan qaatey + Sawiro »